Ungayenza kanjani imayini i-Dogecoins (Ukufaka nokusebenzisa) | Kusuka kuLinux
I-Las izimali ezibonakalayo Sebephenduke imfashini muva nje, ezithandwa kakhulu yilezi:
Kepha sizogxila kokukodwa ikakhulukazi:
1.1 Kungani kuzwakala njenge-meme? ee
2 Imayini kuLinux (Kunconyelwe ukusetshenziswa ezinhlelweni ze-x64):
3 Imayini ku-Android:
Kungani kuzwakala njenge-meme? ee
Ngoba kusekelwe kwi-Internet meme ethandwayo «DogeOkuyinja Shiba inu. Uma ufuna ukwazi kabanzi ngokuvakashelwa kwemali: I-Dogepedia Wikipedia
Imayini kuLinux (Kunconyelwe ukusetshenziswa ezinhlelweni ze-x64):
Ezimayini kufanele sifake ukuncika okulandelayo:
Ku-Ubuntu noma okuphuma kukho (Mhlawumbe kuzosebenza ku-Debian):
Silanda iphakheji nge-SRC:
Iya kufolda ye-cpuminer-2.3.2:
Kufanele ungene esikhundleni se- «umsebenzisi» «osebenzayo» kanye ne- «iphasiwedi, ngalokhu siya kuwebhusayithi elandelayo bese sibhalisa: Ikhasi Lokubhalisa
Uma sesibhalisile, kufanele siqhubeke nokuqinisekisa i-akhawunti yethu nge-imeyili ezofinyelela ku-akhawunti yakho. Uma i-akhawunti iqinisekisiwe, siyangena.
Uzozitholela kuDeshibhodi, lapha sizongena esigabeni sabasebenzi Bami, ngaphakathi kwabasebenzi Bami sizokwakha isisebenzi esinegama nephasiwedi oyifunayo. Uma lokhu sekwenzile siqhubeka nokulungisa umyalo olandelayo:
Sifaka u- "user" esikhundleni somsebenzisi obukade umbhalisa kuma-nut2pools, "isisebenzi" ngegama loMsebenzi esimdale ngaphambili ne "password" nge-password yoMsebenzi HHAYI womsebenzisi.
Ilungile! Usuvele usezimayini, ungabona inani le- Ama-Dogecoins kumayini kuDeshibhodi
Ukuze senze okwami ​​ku-Android singafaka uhlelo lokusebenza olulandelayo ku-Google Play Isitolo:
Uma sekufakiwe siya kule webhusayithi elandelayo bese sibhalisa: Ikhasi Lokubhalisa
Uzozitholela kuDeshibhodi, lapha sizongena esigabeni sabasebenzi Bami, ngaphakathi kwabasebenzi Bami sizokwakha isisebenzi esinegama nephasiwedi oyifunayo.
Uma lokhu sekwenziwe, sivula i-DroidMiner.
Ku- «Mining Pool URL» sibeka:
Ku- "Username" ufaka igama lakho lomsebenzisi lekhasi obhalise kulo phambilini, isikhathi negama loMsebenzi olidalile, Isibonelo: user.worker
Ku- «Iphasiwedi» iphasiwedi yoMsebenzi HHAYI yomsebenzisi.
Ku- «1», khetha inani lama-cores iselula yakho elinalo.
Khetha inketho «LTC / DOGE / XPM» bese uthinta «Qala»
Kwenziwe, usebenza ezimayini! ungabona inani le- Ama-Dogecoins kumayini kuDeshibhodi
Kukhona futhi amathuba okumba ama-Dogecoins ku-MS Windows, kepha njengoba le bhulogi iyiSoftware yamahhala, asiyibeki inqubo. 😉
Ikheli le-Pss ikheli lami le-Dogcoins 🙂 DAQVhckjg72YsLWXTGUqzu46gbH9Phcq79
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Ungayigumba kanjani iDogecoins (Ukufaka nokusebenzisa)
Kuyathakazelisa lesi sihloko Sezimali Zangempela. Njengoba angazi lutho ngezomnotho, angiqondi ukuthi bangaba nenani elifanele. Akudingi lokho ukwenza isipele, kusho ngegolide noma okuthile kwensimbi?
Ngangihlale ngizwa ngamaBitcoins, kepha ngiyabona ukuthi kunezinye izindlela eziningi .. kuzofanele ngijule ngalolu daba ukuze ngibone ukuthi kunjani.
Ngiphinde ngithole ukuthi "izimayini" zifuna ukwazi kakhulu. Azinamkhawulo? Ngingayenza imali ngokungapheli?
Ngokwethiyori kunomkhawulo. Iphuzu ukuthi iphuzu lifinyelelwa lapho imali ingasakwazi "ukwenziwa" ngaphandle komoya omncane.
Kulezi zinsuku zonke izimali, ezingokoqobo noma cha, zibiza okuthile kuphela ngoba kukhona abantu abakholelwa ukuthi kufanele okuthile, futhi bamukela izinkokhelo ngohlobo oluthile lwemali ngoba bakholelwa ukuthi leyo mali izokwamukelwa ngomunye umuntu ukuze abanikeze okuhle noma insizakalo. Ukuqagela okumsulwa, wow.
Nayi i-athikili enhle kakhulu echaza ukuthi yini inzuzo enkulu yezimali zendabuko kunalezo ezibonakalayo:
"Bafanele okuthile kuphela ngoba kunabantu abakholelwa ukuthi kubiza okuthile, futhi bamukela izinkokhelo ngohlobo lwemali oluthile ngoba bakholelwa ukuthi omunye umuntu uzokwamukela leyo mali ukuze abanikeze okuhle noma insiza"
Hawu! Impela kufana nezinhlamvu zemali zangempela ...
Akekho olandela indinganiso yegolide, noma enye. Izinqolobane ezisuselwe kuzo (umthombo wazo "wokuzethemba") ezinye zezimali "okuthiwa" zinamandla ...
«Namuhla zonke izimali, ezingokoqobo noma cha ...»
Njengamanje zonke izimali zibonakala. (i-virtual akuyona ikhompyutha kuphela)
Izimayini ziyefana nokusebenzela izinhlamvu zemali. Unikeza ingxenye yamandla akho ekhompyutha kunethiwekhi ye-cryptocurrency, ukuze ikwazi ukwenza ibhizinisi layo, bese kuthi bona bakukhokhele ngaleyo mali. Okungenani yilokho engikuzwisisile.
Sawubona Elav, phambilini izinhlamvu zemali zazibiza insimbi ezazenziwe ngayo futhi ukwenziwa kwensimbi leyo kungaholela ekuqothulweni komhlaba wonke naseziyaluyalwini eziningi. Ngemuva kwalokho, izinhlamvu zemali zaqala ukususelwa kuzinga legolide, okusho ukuthi uhlamvu ngalunye lwemali "lubiza i-X peso yegolide" kepha kusukela ngesikhathi senkinga kawoyela ka-1973 (ngenkathi useyingane xD 😛) izinhlamvu zemali akudingeki zibe value elisekelwa yilutho, konke kungukuqagela futhi "bayazethemba ukuthi izwe elikhiphayo lizokukhokhela." (Lokhu kuphezulu kakhulu, ngenhla futhi angikweluleki ukuthi ufunde ku-wikipedia ngoba sonke lesi sihloko sibhalwe njengembongolo).
Njengoba wonke umnotho manje ususekelwe kudola, i-United States ingazikhokhela yona ngemali yokwehlisa imali yayo ukukhokha isikweletu sayo. Okuvame ukubizwa ngokuthi "ukuphrinta amathikithi." Kodwa-ke, njengoba ezinye izimali zisuselwa kudola, baphoqeleka ukuthi behlise imali ukuze bangabizi kakhulu emakethe. Ukukunika umbono, i-EU, iJapan kanye ne-US bebeprinta imali engamaphepha iminyaka neminyaka ngaphandle kokuma ngoba bezama ukugcina imali izinzile ... kodwa ngolunye usuku lokhu kuzoqhuma futhi uzosusa kuphela eCuba ngokungabi nawo umnotho njengemakethe enjalo (futhi izokuhlakazela ngokuqinisekile).
Izimayini zingagaywa okuhlelwe ku-algorithm yohlamvu lwemali, ekuqaleni eziningi zenziwa ngezinsizakusebenza ezimbalwa kanye nezinsizakusebenza ezingaphezulu nangaphezulu, umkhawulo uyanda kancane kancane.
Ayikho imali enokugunyazwa kwangempela kepha iyinkohliso, ngiqonde ukuzethemba onakho ezweni olikhiphile noma enhlanganweni. Idola amashumi eminyaka alilandeli izinga legolide kanti abanye abasekho.
Ngiyethemba ukuthi angiwenzi amaphutha ezobuchwepheshe. Angiyazi kahle le ndaba.
Akunjalo njengoba usho, izimali njengomthetho ojwayelekile zisuselwa kunqubo yokwethenjwa eyenziwe ngumnotho wezwe, kepha futhi nenani lazo lilawulwa umbuso, isibonelo esicacile kwaba lapho u-Obama etshela umongameli waseChina ukuthi shiya ukwehlisa imali ukuze uthande ukuthunyelwa kwamanye amazwe, noma into efanayo eyenziwa yiVenezuela ngokunciphisa imali. Esinye isibonelo esicacile ukuthi maphakathi nenkinga yendawo ye-Euro, izinga lokushintshaniswa kwe-Euro yen lehle kakhulu emlandweni, konke kusekelwe ekuthembeni okwenziwe indawo noma izwe, kanye nokwesekwa kwalo kwezomnotho.
AmaBitecoins asuselwa ekutheni abasebenzisi bayayifuna noma cha, intshisekelo abayifaka kubo ayifani nemali yangempela.
Ukungabaza okumbili kuphela: 1) Ama-algarism esizowaxazulula ukuthola la maDogecoins asetshenziselwa ini? 2) Ngabe kukhona isikhombimsebenzisi sokuqhafaza se-KDE?
Uma zisebenza, ezintweni eziningi ... phenya 😀
futhi ngiyazibuza ukuthi kungani ufuna isikhombimsebenzisi sokuqhafaza?
Hewu! Imali Eningi, Enothe Kangaka
Kade ngangisebenza ezimayini iDogecoins isikhashana, kepha ngisebenzisa i-cgminer esikhundleni se-cpuminer (ngisebenzisa ngokunenzuzo iqiniso lokuthi ngine-AMD GPU: D) [uhlamvu lwemali oluningi, olunothe kangako, i-crypto eningi]. Uma ufuna, ngingachaza ukuthi ungayigaya kanjani ngaleyo ndlela.
Ngale ndlela, awazi yini indlela elula yokuba nesikhwama se-Dogecoin ku-linux ngaphandle kokulanda futhi uhlanganise kusuka ku-Git ngqo? Ngifisa sengathi ngabe bekukhona okubekiwe ... Ah, linda, kukukhiphe lokho, ngithole ikhosombe le-XD https://launchpad.net/~cwayne18/+archive/doge
Kuyinto emnandi ukuthola imali "ngokungaziwa", kepha uma iqhathaniswa nemali yendabuko ayifanele kakhulu ... Into kuphela umuntu angayethemba ukuthi i-cryptocurrency izokwazisa noma ... linda imali yendabuko ukuze yehlise . Ngimane ngilinde usuku lapho singasancikile kohlobo oluthile lwemali ukuze siphile (noma ukuthi ama-cryptocurrensets yiwona kuphela anenani langempela).
Ngokombono wami njengombonisi, zonke izimali zanamuhla, noma ngabe kuyini, kubonakala kimi ngathi zisekela kakhulu emnothweni nasekukhiqizweni kwezwe noma kweqembu, ngakho-ke iMelika ekhiqiza futhi ingenise izimpahla ngokushesha okukhulu inzalo yaziswa kakhulu ngokuba yimakethe ekhiqiza inzuzo
Elinye iphuzu noma umbuzo ovelayo kimi Zingaki izitolo eziku-inthanethi okuthengwe ngazo ngalolu hlobo lwemali? Ngingathenga kuphi ngokwesibonelo ngamaDogecoins?
Akukhona lapho ungathenga khona ngezitolo nge-dogecoin .. Isihluthulelo ukushintshanisa iDogegoin ngeBitcoin bese uyazi .. Kuphela ukuthi uthenga ezitolo ezineBitcoins noma uzidlulisela ku-akhawunti yakho yasebhange: D
Ungaguqulela i-Dogecoin ibe yi-Bitcoin lapha: https://bter.com
Yiyo engiyisebenzisa ngaphandle kwezinkinga
Nansi into eyodwa engekho .. Faka isikhwama se-dogecoin kusistimu yakho. Ngakho-ke ngibeka okokufundisa ...:
I-Debian / Ubuntu / iMint:
ukuvuselelwa kwesudo aptudo && sudo apt-get ukufaka libssl-dev libdb-dev libdb ++ - dev libqrencode-dev qt4-qmake libqtgui4 libqt4-dev libboost1.48-dev libminiupnpc-dev libminiupnpc8 libboost-system1.48-dev libboost-fileystem dev i-libboost-program-options1.48-dev libboost-thread1.48-dev libboost-chrono1.48-dev yokwakha-ebalulekile git
Futhi voila 😀
I-zypper ku-libopenssl-devel ukukhulisa ukukhulisa-devel git libdb-4_8 libdb-4_8-devel libqt4-devel
Ngaphambi kokubeka umyalo wokwenza kuyadingeka ukuguqula i-MAKEFILE. Engxenyeni ye-INCPATH, engeza ekugcineni komugqa lokhu: -I / usr / include / db4.8
Ngale ndlela ku-Debian egijima naku "mining" 🙂
Ukuze ube nezinhlamvu zakho zemali ku-pc yakho hhayi ekusingatheni i-inthanethi 😀
UJavier Yañez kusho
Uyakwazi lokho lapho wenza imiyalo
-e expression # 1, uhlamvu 1: i-oda elingaziwa: " "
bese kuthi lapho ngenza i- "make" ngithole lokhu:
*** Alikho ithagethi elishiwo futhi alikho ifayili lokwakheka elitholakele. Phezulu.
Phendula uJavier Yañez
Angikwazi lokhu ngqo, kepha iphuzu ukuthi iBitcoins ikakhulukazi isivele iya kuma-SLI afinyelela kumakhadi ama-4 uma ngingafundanga kahle ngoba izinkinga zezibalo ziyavela futhi kuya ngokuya kube nzima nge-PC ukuzixazulula ... umbono izindleko Izingxenyekazi zekhompuyutha kanye nesikhathi samanje esichithwe enqubeni asikho ngaphezu kwenani lanoma iyiphi imali ozoyithola.
Leyo nkinga ixazululwa yi-PPC
Ngomyalo wokugcina ngithola lokhu:
"./Minerd: impikiswano engeyona inketho engasekelwa 'umsebenzisi.worker: iphasiwedi'
I-PS: Ngishintshe "iphasiwedi" yomsebenzi "kanye" nomsebenzisi ", kepha kusobala ukuthi angikwazi ukuyishicilela. Kwenzakalani?
Uqinisekile ukuthi ubungaphutha?
$ ./minerd -url stratum + tcp: //dogeu.nut2pools.com: 5585 –userpass user.worker: iphasiwedi
Khumbula kunezimpikiswano ezithi –url kanye –userpass
ekhasini lokubhalisa udale isisebenzi sakho ngendlela eyiyo? Ngikwenze ngaphandle kwenkinga
Izimayini ... ngiyabonga ngomnikelo.
wow imali enkulu
doge enjalo inzuzo kakhulu
ngakho-ke i-crypto wow
Ku-Arch Linux uthola iphakethe ku-AUR.
Isifundo esihle kakhulu manje ngaso sonke isikhathi lapho ngifuna ukuqala futhi ukumbiwa kwezimayini kufanele ngenze ngasinye salezi zinyathelo noma ngingaqala ngaphi.
Futhi yini engingayithenga ngale mali ye-crypto?
Ishintshaniswa ngama-bitcoins, ungashintshanisa ama-bitcoins ngamadola noma kwezinye izindawo ungayisebenzisa.
Uma ufuna ukufaka eyami futhi uya kufolda, yenza isikrini bese ubhala umyalo omude ofaka umsebenzisi wakho, isisebenzi sakho ne-password yesisebenzi.
Uyenza kanjani inkulumo yomphakathi?
Lithini ikheli lezinhlamvu zemali?
U-Allan herrera kusho
Uxolo, kepha isixhumanisi esiya ekhasini lokubhalisa asisebenzi, ngabe othile angangidlulisa i-URL NGICELA?
Phendula u-Allan Herrera
UWILLIAM E BANKS kusho
Ngikholwa ukuthi lolu lwazi luphelelwe isikhathi futhi / noma ama-nut2pools «indawo» ifile! Ukuvuselelwa kungamangalisa kepha uma ama-nut2pools «site» engasekho ngicabanga ukuthi iphuzu liyi-moot!
Phendula kuWILLIAM E BANKS
I-ExMplayer: Isidlali seMultimedia ngokuxhaswa kwe-3D, i-Facebook nokuningi